Ungakwengeza kanjani ukuthatha umhlalaphansi? | Ezezimali Zomnotho
Ungakwengeza kanjani ukuthatha umhlalaphansi?
Noma ngabe ungumuntu osemusha futhi onamandla, akulula kuwe ukukhohlwa ukuhlela okulungile kokuthatha umhlalaphansi futhi ungajabulela amandla amakhulu okuthenga eminyakeni yegolide. Ngakolunye uhlangothi, kukhona nesincomo seziphathimandla zezombusazwe ngesidingo sokuba nesengezo ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi. Njengoba kunikezwe ubungozi okungenzeka ukuthi uhlelo lukahulumeni lungakunikeli iholo elihehayo ngokwanele ukwanelisa izidingo zakho eziyisisekelo. Ngakho-ke kungenye yezinjongo okufanele uzibekele zona kusukela manje kuqhubeke.
Ngale kwalokho impesheni ozoyiqoqa lapho usuthatha umhlalaphansi, kufanele wazi ukuthi unezinye izindlela ongazisebenzisa wandise le mali ejwayelekile. Ngamasu ahlukene, amanye aziwa nguwe, kepha-ke amanye azokumangaza ngawo okwangempela. Kunoma ikuphi, kulula kakhulu ukuthi ubacabangele uma kwenzeka bejwayela iphrofayili yakho. Noma ngabe uneminyaka emingaki okwamanje, ukwakha isikhwama sokonga esizinzile ukubhekana nale minyaka yempilo yakho.
Ingxenye enhle yazo ivela ekutshalweni kwemali kuyo izimakethe zokulingana, kepha ngaphandle kokukhohlwa nganoma yisiphi isikhathi okuhleliwe. Ukugcwalisa impesheni yakho ngendlela eyenelisa kakhulu ongayinqoba kule nkinga eyinkimbinkimbi ozoba nayo kule minyaka yokuphila kwakho. Kepha kusukela manje kuqhubeke, kuzoba namasu ambalwa okwenza lesi sifiso esibaluleke kakhulu sisebenze, ingxenye enkulu yabakhokhi bentela ezweni lethu enayo. Lapho kucatshangelwa enye yezimpesheni eziphansi kakhulu endaweni ye-euro.
1 Ukuthatha umhlalaphansi eSpain
2 Izimali zokutshala imali zomhlalaphansi
3 Izinhlelo zomhlalaphansi
4 Imali engenayo engaguquki ngezabelo
5 Izinhlelo zempesheni eziqinisekisiwe
6 Umshuwalense wokonga
Ukuthatha umhlalaphansi eSpain
Iqiniso lokuthi unyaka odlule usishiyile lincike ekutheni abangaphansi kuka-40% babasebenzi ezweni lethu babona umholo ophelele wonyaka ngaphansi kwama-euro ayi-16.982. Le mali iyimali ekhokhwa nguHulumeni kubantu asebethathe umhlalaphansi kuGeneral Regime. Lokhu kukhonjiswa wucwaningo lwakamuva lweMain Employment Wages, olushicilelwe yiNational Institute of Statistics (INE). Ngakho-ke, ekupheleni konyaka we-2017, impesheni emaphakathi eSpain yayimi kuma-euro angama-925,85 ngenyanga, okusho ukwanda okuncane okungu-1,84% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka odlule.
Kunoma ikuphi, kwenziwa i-panorama enelukuluku kakhulu eminyakeni yamuva, equkethe inani elikhulayo labahola impesheni abahola ngaphezu kwabasebenzi abakhuthele. Lo mphumela ungadala imiphumela engadingeki yokuthi lapho kufika isikhathi sakho sokuthatha umhlalaphansi. Ukufika ezingeni lokuthi bangehlise inani nciphisa inani labanikeli. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi kuthakazelise kakhulu ukuthi usuvele uvikele umthombo wokwengeza le mali: Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yimiphi ephumelela kakhulu okwamanje? Yebo, naka kancane uma kwenzeka ubhekisa kubo kusuka manje.
Izimali zokutshala imali zomhlalaphansi
Vele kuyindlela ezimele kakhulu yokwenza thuthukisa amandla akho okuthenga eminyakeni eyigolide yokuthatha umhlalaphansi ngokomsebenzi. Lo mkhiqizo wezezimali ukuvumela ukuthi ulingise kancane kancane ukonga ukuze ukujabulele eminyakeni yokuthatha umhlalaphansi osezingeni elifanele. Ngokuguquguquka okukhulu kunangeminye imikhiqizo ehloselwe ukutshalwa kwezimali. Ngoba uzoba nguwe okhetha iminikelo yemali eya ezikhwameni minyaka yonke. Kusukela lapho ubona kufaneleke kakhulu ukuqala lo msebenzi wokuthatha umhlalaphansi futhi ngokususelwa kuzidingo zakho zangempela zezimali.
Enye yezinzuzo zayo ezifanele kakhulu ilele ekutheni ungakhetha ama-equities, imali engenayo engaguquki noma ezinye izindlela. Ukuze ngale ndlela, ukwazi ukufeza eyodwa noma ezinye izinhloso zokwenza isikhwama lapho kufika isikhathi somhlalaphansi emsebenzini wakho womsebenzi. Kodwa-ke, lokhu kungumklamo wezezimali owelulekwa kakhulu ukuthi uwusebenzise. kusuka eminyakeni engama-50. Ngephothifoliyo yezimpahla zezimali ezingahlukaniswa kahle kakhulu. Ukuze sikuvikele ezimeni ezingezinhle neze ezimakethe zezezimali. Lapho isikhwama sokutshala imali ofake kuso ukonga kwakho kungalahlekelwa yinani.
Kunoma ikuphi, umkhiqizo oqondile kakhulu ozobhekana nomhlalaphansi ngokungangabazeki uhlelo lomhlalaphansi noma lwempesheni. Ngoba ngokuyisisekelo umkhiqizo ohlose ukukhiqiza ithuluzi lokonga noma lokutshala imali elibhekiswe kulo ukumboza izehlakalo ezithileNgakho-ke ukungabi khona kwempahla, umehluko omkhulu phakathi kwabanye, uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo yezezimali. Njalo ngonyaka ufaka inani lokuthi ufika nini umhlalaphansi. Ngokuya ngokutholakala kwakho kwezinsizakusebenza zakho zemali, ungakhulisa lesi sikhwama sokonga.
Ngakolunye uhlangothi, enye yezimpawu ezifanele kakhulu zezinhlelo zomhlalaphansi ihlala eqinisweni lokuthi ingakunciphisa intela yesitatimende semali engenayo futhi, ngakho-ke, nciphisa inani lentela. Njengomphumela waleli qhinga, uzokwazi ukukhokha imali encane yale ntela noma, ngokuphambene nalokho, ukwandisa imali ebuyiswayo okufanele uyithole minyaka yonke. Njengoba nje ungenza uhlobo oluthile lokuhlenga okukodwa ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Uma nje ezinye zezimo ezilandelayo zenzeka: ukungakwazi ukusebenza, ukugula okungathi sína, isimo sokuncika, ukufa komnikazi, ukungasebenzi isikhathi eside,
Imali engenayo engaguquki ngezabelo
Lokhu kungenye indlela yangempela engakunikeza okunye imali engenayo yonyaka efinyelela ku-8%. Ngendlela eqinisekiswe ngokuphelele, ngaphandle kokuvela kwamanani esitoko ezimakethe zezimali. Ngoba ungangabazi ukuthi izinzuzo kuyisu lokuthola imali eyodwa eyengeziwe yesikhathi sokuguga. Ngenzuzo eyengeziwe yokuthi uzokwazi ukwenza imali ngokonga ngekhotheshini yamanani. Kuyindlela ukuthi ingxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi iya kuyo. Ikakhulu, ukuze kube lula ukukhetha lolu hlobo lwemali ejwayelekile minyaka yonke.
Ngaphezu kwalokho, unezinhlobonhlobo zeziphakamiso uma ukhetha izinzuzo. Ngokwezinga lapho izinkampani eziningi ezibalulwe zisabalalisa lo mholo kubaninimasheya, zifakwa enkombeni ekhethiwe yamasheya aseSpain. Ukwenza imbuyiselo kulondolozo lokho kusuka ku-3% kuye ku-8%. Ngemali engaguquki futhi eqinisekisiwe njalo ngonyaka. Lapho ungayiqoqa khona ngezikhathi ezahlukahlukene: njalo ngekota, ngekota yonyaka noma ngonyaka. Kunoma ikuphi, umkhakha kagesi yiwona ophana kakhulu ukunikela ngale mbuyiselo ngesabelo ngasinye. Ngamanani anamandla njenge-Iberdrola, i-Red Eléctrica Española, i-Endesa noma i-Enagás, phakathi kokunye okufanele kakhulu.
Izinhlelo zempesheni eziqinisekisiwe
Eyaziwa nangokuthi yi-PPA, kungenye indlela enganelisa izifiso zabasindisi abalondoloza kakhulu. Ngesizathu esilula sokuchaza futhi lokho kungenxa yokuthi ukuqinisekisa inzuzo ngofeleba. Lokhu ngumehluko omkhulu okulethayo maqondana nezinhlelo zendabuko zempesheni. Ngoba ngakolunye uhlangothi, lo mkhiqizo ugcina izinzuzo ezifanayo zentela njengalezi. Kuyindlela yokuba nomholo ophephile ngesikhathi esifanele somhlalaphansi.
Ngaphakathi kwaleli qembu, okuthiwa I-PIAS. Kulokhu kuba ingxube phakathi kwezinhlelo zempesheni nomshuwalense wokonga. Kunoma ikuphi, bayakuqinisekisa ngempesheni yempilo engakusiza ukwengeza impesheni ngendlela egculisayo ngokuya ngezintshisekelo zakho. Ngaphandle kwenzuzo ekhiqizwe yilo mkhiqizo futhi okungeyona enye yezindawo eziphakeme kakhulu emakethe. Ngakolunye uhlangothi, ungahlala wenza ukuhlenga okuthile ngaphambi kweminyaka eyishumi. Kepha ngokubuyela emuva okuncane, njengokuthi ngeke uzijabulele izinzuzo zalo zentela.
Ekugcineni, kunalo mkhiqizo wezezimali ogxile ekwenzeni imali engenayo yokonga kule minyaka yempilo yakho. Yize kungenye yamamodeli akhombisa inani eliphansi lenzalo futhi kuhloselwe iphrofayili yabatshalizimali abavikelayo. Kuphi ukuphepha kunqoba ngaphezulu kokunye ukucatshangelwa okunolaka. Hhayi ngeze, kusekelwe eqinisweni lokuthi uzoba nale mali ngemuva kweminyaka embalwa yokuyakha. Hhayi ngokushesha futhi nganoma yisiphi isimo kuzoncika ekulondolozeni okunqwabelene kulo mkhiqizo ekutshalweni kwabahola impesheni.
Kunoma ikuphi, nangemuva kokuchaza lezi zinketho zeminyaka yegolide, into ebaluleke kakhulu ukuthi uhlaziye ukuthi siyini isimo sakho sangempela futhi ikakhulukazi izidingo ozoba nazo ngalezo zikhathi ezikhethekile empilweni yakho. Ukuze ngale ndlela, ukwazi ukukhetha ifomethi yokonga evumelana kangcono nezimo zakho zangasese. Futhi uma kwenzeka, kuzoba umkhiqizo ohlukile, noma ngabe une-denominator efanayo kubo bonke. Akukhona okunye ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi ube nemali engenayo engaguquki evela kumhlalaphansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Ungakwengeza kanjani ukuthatha umhlalaphansi?
Imakethe yezabasebenzi eSpain
Ungakwenza kanjani ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe emakethe yamasheya